Ko Toe: ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး
Posted by MYO HAN HTUN at 10:26 PM
ko toe... i am also from mdy...
i heard you like myanmar classic song.. if you have some classic song please sent to me... cos i want to listen.. i also like you.. when i was child my father listen all the time.. so it was used to for me, and i like that...
Ton Tay Thaing Tan
and if you haveasong called "ko yet htar nay " please sent to me ..
my mail is aaron30403@gmail.com
@ Ko Htein Lin
Thanks for visiting and appreciation to my blog. I have some Myanmar songs especially to Toon Taey Thein Tan, Toon Taey Soe Aung, Thu Maung, Sandayar Hla Htut, Sandayar Chit Swe and Yar Zar Win Tint. My brother told me there are so many Myanmar web site you can download and listen those oldies. I had some files with me in my office computer so I decided to sendafew of those in this moment. Most of them are Toon Taey Thein Tan songs and the last one is Yar Zar Win Tint's Ma Khin Hnin See. If I have free time ... I will send you more.
MYO HAN HTUN @ KO TOE
ကိုကျော်ကြီးဆိုတာ ဒီစီဒီက ထင်ပါ့... ကျတော် ရစ်သမျှ ခံတဲ့ လူကြီးပဲ...
ဟုတ်တာပေါ့ ကိုမောင်လှရေ .. ဒီစီဒီကျော်ကြီး ဆိုရင် မန္တလေးကွန်ပျူတာလောကမှာ မသိတဲ့လူနည်းသလောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီစီဒီ မှာ နှစ်နှစ်နီးပါးလောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုမောင်လှပြောသလို ဒီစီဒီမှာ အလုပ်လုပ်တုန်းကတော့ ရစ်တဲ့လူတွေလာတာများပါတယ် ဗျာ။ ရစ်လိုက်ကြတာ ပြောမနေပါတော့နဲ့ ဗျာ။ ကျော်ကြီးကတော့ သိပ်သဘောကောင်းပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ညီအကိုလိုပါပဲ ဗျာ။ တွေ့ရင်တော့ သတိရကြောင်းပြောပေးပါ ဗျာ။